Gacmo-gashiga Galoofisyada Gawaarida Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Warshadda Caruusada Shiinaha ee gacmo gashiga
Xayawaanka Xayawaanka Carruurta
Shanta farood ee gacmo gashiyada xayawaanka lagu qurxiyo xayawaankeena kaliya kuma caawineyso yareynta timaha duulaya ee hawada, waxay sidoo kale kicineysaa saliidaha maqaarka waxayna hagaajineysaa jilicsanaanta dharka iyo iftiinka xayawaanka.
2.Tilmaamaha jilicsan ee shanta farood ee gacmo gashiga xayawaanka xayawaanka ah ee xayawaanka ah ayaa si sahal ah u xajinaya xayawaanka, dhererka saxda ah ee nubsku waxay ka dhigeysaa timo sahlan in la jiido oo la tuuro.
3.Waxaa sii dheer, haddii aad leedahay curcurka yar ama weyn, gacmo gashikan qurxinta waxaa loo sameeyay inuu ku habboon yahay Suunka tayada leh ayaa ka dhigaya mid ku habboon dhammaan cabbirka curcurka.
4.Waa kufiican tahay timo dhaadheer ama gaaban oo timo timo gaaban iyo bisado.Waa timo xayawaan xayawaan ah oo weyn dhamaan noocyada iyo noocyada.
Glove Saarista Timaha
1.Tilmaamuhu wuxuu bixiyaa duugis dabacsan. Kani timo gashi xayawaan ka saarista ayaa ku habboon xayawaannada xasaasiga ah & dhalinyarada.
2.Waxyaalaha gashi-gacmeedka ka saarista timaha xayawaanku waa mid jilicsan oo neefsan kara, suunka curcurka ee la isku hagaajin karo ayaa ku habboon inta badan milkiilayaasha xayawaanka.
3.Glove's velor velor wuxuu si wax ku ool ah u yareeyaa tirada timaha looga tagayo alaabta guriga, dharka ama gaariga.
Galoofyada timaha xayawaanka la saaro waxay ka saarta wasakhda, tandarka iyo timaha dabacsan bisadda, eyga, faraska ama xayawaan kale.
Xayawaanka duugista gacmo gashi
Xayawaanka rabaayaduhu waxay u baahan yihiin is qurxin joogto ah si ay u ilaaliyaan jaakadaha xaaladooda sare. Aroosku wuxuu si dhib la’aan ah u tirtirayaa timaha dhintay iyo kuwa dabacsan. Xirmooyinka xayawaanka xayawaanka ah ee loo yaqaan 'gloves' ee loo yaqaan 'gloves' waxay xiraan oo qurxiyaan jaakada, ka saarida dhajiyeyaasha iyo kicinta timaha timaha, kobcinta caafimaadka iyo dib u soo celinta.
Glove daadinta gacmo gashi Eeyaha
1.Waa mid ka mid ah habka ugu fudud uguna raaxada badan ee lagu hagaajin karo xayawaankaaga guryaha ku daadanaya. Galoofyada daadinta xayawaanka eeyaha waxay hagaajisaa dhaldhalaalka iyo dermaha xunxun iyadoo wasakhda iyo dusha ka qaadaysa jaakadda.
Xarkaha curcurka ee la isku hagaajin karo gacmo gashiga si aamin ah gacantaada ugu dheji intaad is qurxinayso.
Naqshadeynta biinanka madaxa wareegsan ayaa macquul ah, oo u qubeysan kara xayawaanka rabaayadda ah inta ay ku jirto hawsha duugista.
Galoofyada daadinta xayawaanka eeyaha waxay ilaalinayaan caafimaadkooda iyo nadaafadooda iyagoo siinaya baahiyahooda maalin laha ah.
Galoof daadinta eey Dog
Xakamaynta caagga ah ee dabiiciga ah ee gashiga qubeyska eeyga ayaa ka saaraya timaha dabacsan iyo sidoo kale duugista maqaarka,
Marada Eco waxay masaxdaa carada cagaha iyo wejiga.
Suunka la hagaajin karo wuxuu ku habboon yahay dhammaan qaababka gacanta iyo cabirka. Galoofyada qubeyska eeyga ayaa loo isticmaali karaa qoyan ama qalalan, timaha ayaa iska fogeeya.
Gacmo gashi daadin maydhashada eeyga waa mid waara oo muddo dheer soconaya mashiinkana waa lagu dhaqi karaa